Fiofanana amin'ny palitao | Kilasy mpanara-maso hosodoko | Ampp
Tsia: F-32, 1st Floor, 2nd Avenue, Anna Nagar East, Chennai
₹0.00 ny hovidiana
ONLINE COATINGS Portal dia ny sehatra fanofanana sy fanamarinana matanjaka sy manam-pahalalana ho an'ireo mpanara-maso sy mpanara-maso hosodoko izay ao anatin'ny HTS COATINGS. Izy io dia mifandraika amin'ny fitsaboana amin'ny rindrina mifandraika amin'ny indostrialy, Fampiharana firakotra, Fanaraha-maso hosodoko ary fomba fitiliana
Ny Module Coaching InspectorsTraining dia noforonin'ny manam-pahaizana manokana momba ny fandrakofana indostrialy. The manarona manokana niainga avy amin'ny Solika, Gas, Petrochemical, Marine, Shipbuilding, Indostrialy mavesatra. Mpianatra maro miasa amin'ny Onshore, Offshore, Pipeline, Process Industries no nahazo tombony tamin'ity programa E-Learning ity. Mandritra ny fotoana fohy dia manapa-kevitra ny hampiditra taranja maro mifandraika amin'ny varotra hafa toy ny welding, Insulation, Fireproofing, Hot Dip Galvanizing, Thermal Spray, Refractories ary ny fitantanana sns.
Fandrosoana ny asan'ny mpanara-maso
Rehefa vita ny fampianarana an-tserasera dia afaka miasa toy izao ny manam-pahaizana: -
Mpanara-maso ny tena
Mpanadihady QC / QA
Mpampiahy manam-pahaizana fiarovana
Manam-pahaizana momba ny tsy fahana hosodoko hosodoko
Tombony azo amin'ny fampiofanana amin'ny palitao an-tserasera
Ireto tombony manaraka ireto dia amin'ny antsipiriany mifandraika amin'ny fiofanana momba ny inspecteur inspires an-tserasera
Ny fomba elektronika amin'ny Internet sy amin'ny Internet dia manatsara ny fahazoan'ny mpandray anjara fidirana 24 X 7 & 365 andro. Azon'izy ireo ampiasaina ity fiofanana an-tserasera ity amin'ny asa / trano / fotoana fialan-tsasatra / fialantsasatra amin'ny alàlan'ny fidirana mora.
Ny maody an-tserasera dia mampihena ny vidin'ny visa / sidina / fidirana ary trano fandraisam-bahiny raha ampitahaina amin'ny maody Onsite. Ankoatr'izay, azo sorohina ny tsy fisian'ny toeram-piasanao sy ny fahaverezan'ny karama manaraka.
Hizaha diaporama / dinika / firesaka mivantana / horonantsary mivantana / Quizz / andraikitra tsy misy famakiana na fanatanterahana an-tsokosoko ianao. Hitsimbadika / hamita / hamadika / hamerina ny session ianao amin'ny fotoana rehetra tsy misy fetra
Ireo sary an-tsary / atiny dia raisina amina fampisehoana am-peo hanitarana ny fitadidian'ny mpianatra. Hampatsiahivina izany mandritra ny dingana manontolo amin'ny fampianarana an-tserasera.
Ny fianarantsika rehetra dia mitondra andraikitra sy adina mifandraika amin'izany hanatsarana ny fahalalan'ny mpianatra. Ny fanombanana tsindraindray dia hanampy ny mpianatra amin'ny fanadiovana ny fahavitan'ny fampianarana farany.
Ny atiny momba ny fiofanana an-tserasera dia mifanaraka amin'ny fandaharam-pianarana International Inspector. Ny fahalalàn'ny fiofanana an-tserasera dia ilaina amin'ny fanadiovana ireo fanadinana fanamarinana iraisam-pirenena rehetra.
Sarany ara-dalàna ambany indrindra
Hatramin'ny 2014, ny teny filamatra HTS COATING dia ny fanomezana fanabeazana kalitao amin'ny fizarana fizahana sy fitrandrahana indostrialy. Noho izany ny saram-pianarana sy ny saram-panadinana dia mifaninana sy ambany foana raha oharina amin'ireo mpanome tolotra efa misy.
Ireo manam-pahaizana momba ny HTS COATINGS dia mpisava lalana amin'ny fizarana fampiharana sy fanaraha-maso ny indostrialy. Noho izany, ny taranja sy ny atiny rehetra atolotray dia manafaka miaraka amin'ny kinova teknolojia fanavaozana sy fanavaozana ankehitriny.
Tombony an-tserasera amin'ny kalitao HTS
Mpianatra maro no tsy nahafa-po ny faharetany vetivety teo am-panatrehana ny fampianarana International Inspector Training. Mpamatsy fanamarinana iraisam-pirenena toy ny FROSIO / SSPC / NACE / BGAS / ICORR manome mari-pahaizana isan-karazany. Noho ny faharetan'ny fandaharam-pianarana Iraisam-pirenena dia mila kilasy fiomanana fanampiny ny mpianatra. Ka takian'izy ireo amin'ny programa fanofanana sy fanamarinana rehetra. (Fiofanana ho mpanara-maso / mpanara-maso Frosio mpanara-maso / mpanara-maso SSPC / fanamarinana Frosio / mpanara-maso hosodoko)
Mba handresena ny fiofanana maharitra, ny Coatings amin'ny Internet dia nanamboatra an'ity tranonkala ity ho an'ny fandaharam-panomanana isan-karazany amin'ny HTS COATINGS. Ity sehatra E-fianarana ity dia namolavola tamim-pitandremana ny toko tsirairay mba hahazoan'ny mpianatra mora ny teknolojia fanaraha-maso. Ankehitriny dia nanampy programa fanomanana mifandraika amin'ny SSPC sy FROSIO izahay. Tsy ho ela dia hanampy programa hafa mifanaraka amin'ny safidin'ny mpianatra izahay.
COATINGS ONLINE sy HTS COATINGS, dia maniry ny mpianatra rehetra mba hisondrotra tsara ny sehatry ny indostria amin'ny solika, Gas, petrochemical, ary heavy.
NY FAHAGAGANA VOLANA ARA-PANAHY
Fitaovana mpanara-maso sy fanamarinana azo antoka ao amin'ny orinasa
Mpanara-maso sy fanamarinana manamarina: ny olana ara-toekarena manerantany sy ny tahan'ny tsy fananan'asa eto amin'ity tontolo ity dia tsy azo aleha noho ny fikasana sy ny antony maro. Ho fanampin'izay, COVID 19 farany teo
ANKOHO FAMPANDROSOANA NY FIVORIANA ANY AMIN'NY FAMPIDERANA MAMPISOMPOANA
Ny zava-bitan'ny fandrakofana indostrialy sy ny tsingerin'ny fiainana dia voafaritra amin'ny endrika isan-karazany toy ny fomba fanomanana ny ambony, ny fisafidianana ny rafitra mifono, ny tontolo iainana ary
TSY FAHAIZANA AN'NY FANORORANA & FANOKAFANA
Ny fitazonana ny fiarovana ny fahamendrehana dia fahasarotana voaporofo avy amin'ny injeniera, inspektera ary mpitantana amin'ny indostria solika, gazy, petrokimika, ary indostria mpiara-miasa hafa. Famakafakana ny fahombiazan'ny fiarovana, fanatsarana ny ara-batana
Mpampiasa fenitra ISO / SSPC Manerantany
Copyright © 2021 Coatings an-tserasera | Ampandehanin'i Tema WordPress Astra